N ingbo Shuangyu (Samewe), tahaka ny anankiray amin'ny thefamous ordinatera Flat knitting Machine mpamokatra, tsy miraharaha ny habetsahany izay izahay, ka mamoaka fa koa ny toetra, dia manana investedquite abig vola ao amin'ny advancedprocessing fitaovana mba hanatsarana ny machinequality. Isika mandray mpiasa fampiofanana ho zava-dehibe mba hahazoana antoka sy hanatsara ny vokatra tsara.
SY52-S dia milina ara-toekarena sy azo ampiharina namboarina ho ourclients. Manana tombony amin'ny vidiny mirary, milamina toetra andthe fohy ezaka recouping ny Renivohitra outlay.The adpots tanteraka milinasolosaina-maso rafitra ho an'ny famindrana, ary haingana kokoa tuckingkalesy miverina ary koa ny moto rafitra fanaraha-maso ho an'ny colorchanging. Manolotra milamina fampisehoana sy haingam-pandeha, aryhanatanterahany eo amin'ny asa lehibe kokoa, toy ny intarsia, tsotra sticth, mahay mandanjalanja tsara, tariby rafitra, cross-stitch, jacquard sy ect.
SY52-2S adpots tokana tsaina anao koa anefa ny tsara sy ny lafiny roa fanjaitra fisotroana rackingfor marokoroko fanjaitra fisotroana, haingam-pandeha izany fiovan-javatra mahomby thekitting hampitombo haingana ny 20% -30%. Samy lafiny roa amin'ny grippers amin'ny fanapahana
dia midika hoe hampihena ny efitra amim-pahombiazana ny iray toko sy hanatsara productivity.This andian-dahatsoratra dia useddigital teknolojia mba hahatratra ny fakantahaka oftransfer, tuck, pointelle, intarsia, jacquard, toa famolavolana, miafina famolavolana sy ny asa tsy tapaka kitting modely, dia alsocan raiki-pitia tsy ara-dalàna maro mena jacquard, intarsia, tariby sy ny fomba rafitra pointelle.
SY52-3S adpots tokana tsaina anao koa anefa ny tsara sy ny lafiny roa fanjaitra fisotroana rackingfor marokoroko fanjaitra fisotroana, haingam-pandeha izany fiovan-javatra mahomby thekntting hampitombo haingana ny 20% -30%. Samy lafiny roa amin'ny grippers amin'ny fanapahana dia midika hoe hampihena ny efitra pahombiazana kofehy sy hanatsara mamokatra. Io andian-dahatsoratra no ampiasaina nomerika teknolojia mba hahatratra ny fakantahaka ny famindrana, tuck, pointelle, intarsia, jacquard, toa famolavolana, miafina famolavolana sy ny hafa tsy tapaka fomba knitting miasa, izany ihany koa dia afaka raiki-pitia tsy ara-dalàna maro mena jacquard, intarsia, tariby sy ny pointelle rafitry ny fomba .
" Tsara toetra, tsara fanompoana " foana ny pinoany sy ny Izaho mino. Mitondra ny ezaka rehetra mba hifehezana ny toetra, fonosana, iantsoan'i sns ary ny QC dia jereo ny tsipiriany rehetra nandritra ny famokarana sy eo anatrehan'ny sambo. Isika vonona ny hanorina fifandraisana lava raharaham-barotra amin'ireo izay mitady ny vokatra avo lenta sy tsara asa fanompoana. Ny orinasa manohana ny fanahin 'ny "zava-baovao, firindrana, ekipa asa sy ny fifampizaràna, lalana, takarina sy fandrosoana". Mba omeo ny vintana ary dia hanaporofo ny fahaizany.